कहाँ-कहाँ छ नेपाल-चीन सीमा विवाद ? - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
कहाँ-कहाँ छ नेपाल-चीन सीमा विवाद ?
काठमाडौं । चीनसँगको सीमाबारे विवाद भएको खासै बाहिर आउँदैन। पहाडी र विकट हिमाली क्षेत्र भएकाले चीनसितको सीमा–विवाद बाहिर नआएको मात्रै हो। नापी विभाग महानिर्देशक प्रकाश जोशीले दुई ठाउँमा सीमा विवाद रहेको बताए। उनले सगरमाथाको उचाई, दोलखाका पर्ने ५७ नम्बर पिलरमा समस्या रहेको स्वीकार गरेको छन्। नेपाल र चीनको सगरमाथाको उचाइबारे पनि एकमत छैनन्।